यस्ता छन् सेक्स पावर बढाउने लसुन खानुका फाइदाहरु, जानी राखौ
सेक्स पावर बढाउने लसुन खानुका फाइदाहरु
अगस्ट 30, 2019 अगस्ट 30, 2019 साइन्स इन्फोटेक	4 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, लसुन
लसुन हाम्रो भान्सामा प्राय: अनिवार्य भएको हुन्छ । लसुनको वैज्ञानिक नाम अलियम सॅटीवेम (Allium Sativem) हो । हामीले यसको रहस्य आजसम्म पनि जान्ने प्रयत्न गरेनौं । लसुनको बारेमा हालैमा केहि कुरा प्रकाशमा आएको छ । लसुनमा हुने एक प्रकारको सेक्स पावर बढाउने खालको गुणको कारणले गर्दा यो भान्सामा हुने गरेको रहस्य खुल्न आएको छ । लसुनको गन्ध महिलालाई धेरै प्रिय हुने कुरा बताईएको छ ।
लसुन मसलाको रूपमा प्रयोग हुदै आएको छ । लसुनमा औषधिको गुण हुने भएकाले यसको महत्व धेरै बढेको पाइन्छ । काचो लसुनमा तिब्र गन्ध भएकाले लसुलाई औषधिको रूपमा लिएको हुन सक्ने केहिको अनुमान छ । लसुनमा एंटीएजिंग गुण समेत भएकाले छालाको रोगमा पनि उपयोगी मानिएको छ ।
लसुनलाई पिसेर निकालेको रसलाई कालो दाग भएको ठाउमा लगाउने ५ मिनेटपछि पानीले धोएमा कालो दाग मेटिने हुन्छ । आउनुस आज हामीले लसुन के कस्ता रोगमा सेवन गराउनाले फाइदा हुन सक्छ भन्नेबारे प्रकाश पार्नेछौं । प्रकृतिको अनुपम उपहारलाई प्रयोग गरेर लाभ लिन सिकौं ।
लसुनको प्रयोगबाट निको हुने रोगहरू
१. High Blood Pressure मा लहसुनले राम्रो फाइदा गर्दछ । Blood Pressure का रोगीलाई नित्य लसुन सेवन गर्ने सल्लाह दिनुपर्छ ।
२. Constipation र Gastritis को रोगमा लसुनलाई ठूलो औषधि मानिएको छ । नियमित लसुन खानेलाई यो रोग लाग्दैन ।
३. मुटु सम्बन्धि रोगमा लसुन ठूलो औषधि मानिएको छ । मुटु सम्बन्धित रोगीले नियमित लसुन सेवन गर्नुस् भन्ने हाम्रो राय छ ।
४. Digestive System लाई बलियो बनाउन लसुनको भुमिका ठूलो देखिन्छ । नियमित लसुन सेवन गर्नाले यो समस्या हल गर्दछ ।
५. Cold, Cough, Asthma आदि रोगमा समेत लसुन उपयोगी औषधि मानिन्छ ।
६. लसुनको नियमित सेवन गर्नेहरुको सेक्स पावर अत्यधिक बढ्ने गर्दछ । सेक्स कमजोर हुनेहरूले खानामा लसुनको बढी प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।
नोट : लसुनलाई घरको डाक्टर भनेर पुकार्ने चलन छ । लसुन प्रयोग गरौं भन्ने हाम्रो राय छ । कुनै पनि घरेलु औषधि सेवन गराउनुको उद्धेश्य भनेको रोग नलागोस भन्ने हो । सवै जसो रोगमा यसको प्रयोग नहुन सक्छ । डाक्टरको परामर्शमा उपचार गराउदा ठिक हुन सक्छ ।
स्वास्थ्यको लागि तोरीको साग खानुका फाइदाहरु
मानव स्वास्थ्यको लागि चम्सुरको भाजी खानुका फाइदाहरू
← यस्ता छन् श्रीमती बिग्रने कारणहरु, जानी राखौ
भगवान कृष्णबारे जान्नैपर्ने ८ रहस्यहरु →
छाला सम्बन्धित रोगवाट बच्ने उपायहरु
अप्रील 21, 2019 अप्रील 21, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
एलर्जी गराउने भलायोका चमत्कारिक फाइदाहरु
जुलाई 21, 2019 जुलाई 21, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
फ्रेवुअरी 1, 2019 फ्रेवुअरी 1, 2019 साइन्स इन्फोटेक 8
4 thoughts on “सेक्स पावर बढाउने लसुन खानुका फाइदाहरु”
Pingback:यस्तो छन् ८५ प्रतिशत पानी पाइने लौका खानुका फाइदै फाइदाहरु, जानी राखौ
Pingback:तरकारी फलफूलमा राखेको विषादीले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असर
Pingback:यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि फलफूल खानुका फाइदाहरु, जानी राखौ
Pingback:यस्तो छ शरीरमा भएको कालो दाग हटाउने सुत्र, जानी राखौ
उपयोगी औषधि साइलीशिया (Silicea) र यसको प्रयोग
नेपालको पर्यटन विकास र अर्थतन्त्र